Top 10 4K Video Ntụgharị na 2015
Top 10 free 4k video converters maka Windows na Mac
Anyị anọwo maara na 1080p mkpebi si nnọọ ụfọdụ afọ ugbu a. Otú ọ dị, HD emewo a ọhụrụ itu ukwu na '4k UHD' àjà elu karịa 1080p mkpebi. 4k UHD na-tumadi ji na dijitalụ sinima na 4096x2160 dị ka ya pixel mkpebi ma ọ bụ Ultra HD telivishọn na 3840 × 2160 dị ka ya mkpebi. The 4k technology-enye ohere ọrụ na-enwe nnọọ zuru ezu na ihuenyo nke fim na videos nke bụ ekwe omume n'ihu. 4k ịbụ dịtụ ọhụrụ, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị na-akwado 4k na kama mmachi nhọrọ na-egwu na vidio ndị a na a 4k video ọkpụkpọ.
Nkebi nke 1: Top 5 4k video converters n'ihi na windo
Nkebi nke 2: Top 5 4k video converters maka Mac
Windows na Mac ọrụ nwere ike iji Wondershare Video Converter Ultimate, a ọkachamara convertor maka 4k videos. Wondershare Video Converter Ultimate Nwere ike tọghata ọ bụla video nke ọ bụla mkpebi na 4k usoro. Ọzọkwa, ọ nwere ike tọghata ọ bụla 4k video n'ime ihe ọ bụla nkịtị video formats nke AVI, MP4, MOV, WebMD, WMV, FLV, DivX nakwa dị ka otu ihe ahụ na HD.
Ị nwere ike tọghata ọ bụla video ke 3840 x 2160 ma ọ bụ 4096 x 2160 4K mkpebi.
Ọ na-ekwe ka ị na-dezie 4k video dị ka ubi, ewepụtụ, jikota, watermark, bugharia, mmetụta na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ị nwere ike-egwu 4k videos na ngwaọrụ gị nakwa budata ha kpọmkwem site YouTube na iji na-wuru Downloader na a ngwa.
Wondershare Video Converter Ultimate-Enyere gị aka tọghata 4k videos maka obere ngwaọrụ dị ka gam akporo ngwaọrụ, iPad, iPhone, TV, DVD, wdg
Record ọ bụla 4k vidiyo si na nkwanye online saịtị.
Mụta ihe ebe a >>
2. AcroKit Video Converter Ultimate
Nke a ngwa-enye gị ụdị akakabarede na i nwere ike na-arụ ọrụ na 4k UHD video faịlụ.
Ọ na-enyere iji tọghata 4k videos ka AVI, MKV, WMV, MOV na ndị ọzọ na formats.
I nwekwara ike tọghata videos n'ime 3D iji ngwa a usoro.
Ọ na-ekwe onye ọrụ ịgbakwunye ndepụta okwu n'ime video faịlụ ma na-akwado Apple ProRes, DNxHD na ndị ọzọ na ọkachamara ngbanwe formats.
Pavtube Video Converter Ultimate bụ ike omume na nwere otutu atụmatụ dị ka BDMagic, DVDAid, Video convertor na video nchịkọta akụkọ. Nke a nile na otu usoro ihe omume na-enyekwa ibu-ngwa ngwa akakabarede ọsọ maka videos.
Ka ọ bụla ọzọ converting usoro, ọ nwere ike tọghata dị iche iche faịlụ formats dị ka AVI ka WMV na na.
Ọzọkwa, ị pụrụ n'ọgba vidiyo na YouTube enyi na enyi format nke ga-ekwe ngwa ngwa bulite nke vidiyo na YouTube.
Dị ka ihe nchịkọta akụkọ, ị nwere ike ewepụtụ a video ma ọ bụ ubi ya ka ona gị chọrọ.
Na-agbanwe agbanwe ihie ma ọ bụ na-agbakwunye ndepụta okwu bụ ihe ọzọ na isi atụmatụ nke a usoro.
Ke adianade do, i nwere ike inwe nkwado ndabere nke Blu-ray 3D nkiri na 3D / 2D video faịlụ dị ka MP4, AVI na ndị ọzọ.
Pavtube Video Converter Ultimate na-akwado Nvidia CUDA na ATI Stream osooso teknụzụ.
4. BlackMagic 4K Video Ntụgharị
Ọ bụrụ na ị dị oké njọ film Ndinam, ị kwesịrị ị na-maara na BlackMagic sinima ese foto na-otu nke kasị mma ese foto dị. Nke a na usoro dị nnọọ mfe iji dị ka nnọọ na ị nwere iji mara na video faịlụ n'ime Ntụgharị, họrọ gị chọrọ mmepụta format, kpatụ àgwà na etiti ọnụego ntọala na pịa tọghata.
Ị nwere ike mfe mbubata na dezie 4k videos n'ime ewu ewu video edezi software dị ka Premiere, uchu, Final Cut Pro, na ọtụtụ ndị ọzọ na iji BlackMagic 4k video Ntụgharị.
Ị nwere ike tọghata BlackMagic 4k videos n'ime format na ike ga-dezie ọ bụla video edezi software.
Ọ bụ dakọtara na ma Windows PC na Mac kọmputa.
Faịlụ nwere ike converted n'ime MOV, mpg, AVI na ndị ọzọ na format nnọọ mfe.
Otu nke kasị mma atụmatụ bụ na ọ bụ maka free download.
5. 4K TV Ntụgharị
On a 4k telivishọn, ọ bụghị ihe niile dị iche iche nke video faịlụ, dị ka mgbe AVI, MP4, MOV na na, na-enwe ike na-egwuri-enweghị enyemaka nke na mpụga ngwá ọrụ. N'ihi ya, na-ekiri vidio ndị a na gị 4K UHD ihuenyo, ị ga-mkpa software dị ka 4K TV Ntụgharị.
4K TV Ntụgharị ohere ọrụ na-ekiri fim nke ha nhọrọ on a 4K telivishọn.
Nke a ngwa coverts ewu ewu video formats na 4K mkpebi.
Ọ bụ maka niile Windows na Mac usoro.
A ọkachamara convertor maka 4k videos. Wondershare Video Converter Ultimate Nwere ike tọghata ọ bụla video nke ọ bụla mkpebi na 4k usoro. Ọzọkwa, ọ nwere ike tọghata ọ bụla 4k video n'ime ihe ọ bụla nkịtị video formats nke AVI, MP4, MOV, WebMD, WMV, FLV, DivX nakwa dị ka otu ihe ahụ na HD. I nwekwara ike ibudata 4k Videos si video nkekọrịta saịtị na ọkụ 4k videos DVD na Software
2. EaseFab Video Ntụgharị maka Mac
EaseFab 4K Video Convertor bụ otu n'ime ndị kacha iji video Ntụgharị maka ntughari nke 4k videos. Ọ bụ ọkachamara video Ntụgharị niile Mac ọrụ nke nwere ihe dị ịtụnanya na obosara collection nke atụmatụ.
Na-eri nke ngwaahịa a bụ $27.96 nke bụ ndị dị ọnụ ala ọkachamara video Ntụgharị ngwa na ahịa.
I nwekwara ike ibudata a free ikpe iji chọpụta ma ọ bụ uru gị ego gị na chọrọ.
Ọ nwere ike na n'ọgba 4k vidiyo na 1080p ma ọ bụ 720p HD ma ọ bụ ọbụna SD video usoro.
Ị nwere ike iji nke a software iji tọghata gị video ihe dị iche iche omume dị ka iMovie, uchu Media dere, Final Cut pro, wdg nakwa n'ihi ProRes, DVCPRO, MPEG-3 na ndị ọzọ.
Ndị ọzọ karịa ịbụ ọrụ enyi na enyi, ọ na-enye nnọọ ngwa ngwa akakabarede ọsọ na elu mmepụta mma.
Ka ọ bụla ọzọ video nchịkọta akụkọ, ọ na-enye gị ohere iji ewepụtụ, akuku na watermark video faịlụ.
MacX Video Converter Pro bụ ọkachamara 4k video convertor na-ekwe ka 4k nkiri converting, nbudata na-edezi dị ka ya ndabere atụmatụ.
Nke a software na-họọrọ iji tọghata niile ewu HD na SD video formats n'ime 4k video faịlụ.
Ọzọkwa, ị pụrụ tọghata YouTube 4k videos ka AVI, MP4, MOV na ndị ọzọ na formats.
Ịnwere ike ịnyefe 4k videos gị iPhone 6 / gbakwunyere, Galaxy S6 na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Nke a software na-enye ohere ọrụ ibudata 4k fim online video weebụsaịtị tinyere 83 X 4K video akakabarede ọsọ.
MacX Video Converter Pro nwere ike ijikwa ma SD na HD video format ma na-enye kemeghi ọnọdụ nhọrọ maka ya ọrụ.
4. WinX HD Video Converter maka Mac
Nke a video Ntụgharị na n'elu ọtụtụ nke atụmatụ àjà hassle free HD video akakabarede ngwọta na Mac. Ọ nwere ike tọghata HDTV / HD-camcorders videos, Blu-ray videos, MKV, HDTV, 4K UHD videos, MPEG-TS, BDAV, MOV, OGM, WMV, FLV, TS, MPEG, ọkọlọtọ AVI na QT videos. Nke a bụ 83 ugboro ngwa ngwa HD, kemfe na vasatail video Ntụgharị N'ihi na Mac na-abịa na ọtụtụ ngwaọrụ presets maka iPad Pro, iPhone 6S / 6 (Plus), Obere 4, Apple TV (4), Air 2, iTunes, Samsung Galaxy Cheta 5 / S6 onu +, Android, Chromecast, n'elu Pro 3, WP8, Amazon Kindle Fire, PSP, Xbox, wdg
Mac ihuenyo na Igwefoto Video teepu
Dezie / emefu Videos na Facility
Lightning Fast Video Nchigharị Speed
Ịtụnanya mmepụta Video Audio Ogo
Nkwado Multi-track HD na Blu-ray Video
Tọghata Videos maka Apple na Android
Online Video Downloader na Ntụgharị
Nga-wuru Photo ngosi mmịfe Onye Okike
5. XAVC Video Ntụgharị
Nke a Ntụgharị enyere na converting XAVC 4K (3840x2160 na 4096x2160) ma ọ bụ 2K footage na-ewu ewu formats dị ka WMV, AVI, MP4, mpg, FLV, MP3, wdg XAVC 4K video Ntụgharị maka Mac nwere ike kpamkpam-agba ọsọ na Mac 10.5-10.8 (Mountain Odum ).
Nweta Best Flip4mac Alternative maka Yosemite
Olee otú Play WMV Files na OS X Yosemite
Nweta Best Perian Alternative maka Yosemite
Top MTS Player mkpa ka ị mara
Olee otú iji tọghata MTS faịlụ ka 3GP
Get a Free Video Ntụgharị enweghị Watermark
Keepvid maka Mac: Download Online Video Na One Pịa (Mountain odum gụnyere)
WTV ka MP4: Olee otú iji tọghata WTV ka MP4 ọsọ ọsọ na mfe
Olee otú Record Pandora ka MP3
Olee otú iji tọghata MTS ka WMV
> Resource> tọghata> Top 10 4k video converters maka Windows na Mac